UKhenketho loMtshato: Ukuphefumlela uBomi obutsha kuhambo kunye noKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Imitshato yothando » UKhenketho loMtshato: Ukuphefumlela uBomi obutsha kuhambo kunye noKhenketho
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Imitshato yothando • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Imakethi yoCwangciso loMtshato iyakhula, kwaye inokuba yindawo nje yokhenketho efunekayo ukuvuselela ishishini lokuhamba emva kobhubhane.
Imarike yoCwangciso loMtshato lwehlabathi kulindeleke ukuba inyuke ngesantya esikhulu ngexesha loqikelelo, phakathi kuka-2021 no-2025.
Ngo-2021, imakethi yoCwangciso loMtshato ibikhula ngesantya esizinzileyo.
Ngokunyuka kokwamkelwa kwezicwangciso ngabadlali abaphambili, imakethi kulindeleke ukuba inyuke ngaphezu kwendawo eqikelelwayo.
UNancy Barkley, uMququzeleli woKhenketho loMtshato kuba Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi (WTN) ibikhuthaza ukuba uKhenketho loMtshato lufuna ukwamkelwa ngakumbi njengoko lubalulekile kuqoqosho lwendawo ekusingwa kuyo. Uqhwabela izandla Igumbi leendaba lokuJonga iMarike ngokuhlela oku kushicilelo lwabo lwamva nje, "IMarike yoCwangciso loMtshato ka-2021 iSabelo seHlabathi, ubungakanani, iFuture Demand, uPhando lweHlabathi, Abadlali abaKhokelayo abaPhezulu, iiNdlela ezisakhulayo, uMmandla ngoQoqosho ukuya ku-2025."
Ekuqaleni kuka-2020, isifo se-COVID-19 saqala ukusasazeka kwihlabathi jikelele, izigidi zabantu kwihlabathi liphela bosulelwa sisifo se-COVID-19, kwaye amazwe amakhulu kwihlabathi liphela aphumeze uthintelo lweenyawo kunye nemiyalelo yokuyeka umsebenzi. Ngaphandle kwezixhobo zonyango kunye nemveliso yenkxaso yobomi, uninzi lwamashishini luchaphazeleke kakhulu, kwaye amashishini eBenomyl nawo achaphazeleke kakhulu.
Ingxelo yeGlobal "yeMarike yoCwangciso loMtshato" (2021-2025) ingxelo ibandakanya idatha yabavelisi, kubandakanya ukuthunyelwa, ixabiso, ingeniso, inzuzo enkulu, irekhodi yodliwano-ndlebe, ukuhanjiswa kweshishini, njl., enceda umthengi azi malunga nabakhuphisana ngcono. Le ngxelo ikwabandakanya yonke imimandla kunye amazwe ehlabathi, ebonisa isimo sophuhliso lwengingqi, kubandakanywa ubungakanani beemarike, umthamo, kunye nexabiso, kunye nedatha yexabiso.
Ukongeza, ingxelo ikwabandakanya idatha yecandelo, kubandakanywa uhlobo lwecandelo, icandelo leshishini, icandelo leshaneli njl. Ikwabandakanya ulwazi lwabathengi bamashishini ahlukeneyo, ebaluleke kakhulu kubenzi.
"IMarike yoCwangciso loMtshato" yeHlabathi (2021-2025) ibonelela ngemeko kunye nemibono yokukhula yohlalutyo lwe-pin-point yokutshintsha amandla okhuphiswano kunye nembono ejonge phambili kwizinto ezahlukeneyo eziqhuba okanye ezinqanda ukukhula koshishino. IMarike yoCwangciso loMtshato ibonelela ngohlalutyo olucokisekileyo lobungakanani bemarike, isabelo, ukukhula, umda, kunye nembonakalo yemboniselo yoshishino loCwangciso loMtshato. Le ngxelo ibonelela ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko olufunekayo ukuqonda uphuhliso oluphambili kwinkcitho yemalike kwimarike yoCwangciso loMtshato kunye neendlela zokwandiswa kwecandelo ngalinye kunye nommandla. Uphononongo lwabelana ngokusebenza kwemarike yoCwangciso loMtshato kokubini ngokomthamo kunye nengeniso kwaye le nto iluncedo kwaye iluncedo kwishishini. Fumana isampula yePDF yengxelo.
Ukwazi ukuba ubhubhani we-COVID-19 uza kuyichaphazela njani na iMarike yoCwangciso loMtshato/uShishino, cela ikopi eyisampula yengxelo.
Malunga neWorld Tourism Network
Uthungelwano lwezoKhenketho lweHlabathi (i-WTN) lilizwi ekudala lilindelwe lamashishini amancinci naphakathi okhenketho kunye nokhenketho kwihlabathi jikelele. Ngokudibanisa iinzame, kuzisa phambili iimfuno kunye neminqweno yamashishini amancinci naphakathi kunye nabachaphazelekayo. I-World Tourism Network yaphuma kwingxoxo ye-rebuilding.travel. Ingxoxo ye-rebuilding.travel yaqala nge-5 kaMatshi, 2020, ecaleni kwe-ITB Berlin. I-ITB yarhoxiswa, kodwa i-rebuilding.travel yasungulwa kwi-Grand Hyatt Hotel eBerlin. NgoDisemba, i-rebuilding.travel iqhubekile kodwa yakhiwe ngaphakathi kombutho omtsha obizwa ngokuba yiWorld Tourism Network. Ngokudibanisa amalungu ecandelo labucala kunye nelikarhulumente kumaqonga ommandla nawehlabathi, i-WTN ayithetheleli amalungu ayo kuphela kodwa ibanika ilizwi kwiintlanganiso ezinkulu zokhenketho. I-WTN ibonelela ngamathuba kunye nothungelwano oluyimfuneko kumalungu ayo kumazwe angaphezu kwe-120. Cofa apha ukuze ube lilungu.